Caruurtu waxay la kulmaan nolol maalmeed iyada oo loo marayo raaxo iyo alaab guri
Alaabta guriga iyo alaabta guriga lagu duuriyo
Miisaska dabiiciga ah ayaa sidoo kale dhiirrigeliya xirfadaha luqadda iyada oo loo maro ciyaaraha ciyaaraha
Alaabta la gashado waxay ku simeysaa nolol maalmeedka
Alaabooyinka dilladu waxay ku fiican yihiin qolalka carruurta ee badan. Iyada oo ay carruurtu ku ciyaarto alaabta dollinka waxay abuuri kartaa adduunkooda ciyaarta. Laakiin muraayadaha duurjoogta ah sidoo kale waxay ku habboon yihiin sida ciyaaraha barashada?
Xubinta Dollinka - ku tababar nolosha nolol maalmeedka
Jawaabta halkan waa cad "haa" - iyo siyaabo badan.
Dukaamada iyo alaabta dollinka
Caruurtu waxay bartaan ciyaarta iyagoo raacaya doorarka qaarkood oo ay ku dhaqmaan habdhaqan horay loo yareeyey ama ka yar.
Alaabta guriga la dhigo, sida aad u iibsan kartid dukaamada intooda badan ee alaabada lagu ciyaaro, waxay abuuraan shuruudo ku haboon inay dib u habeeyaan nolosha dadka waaweyn.
Alaabta dolladu waxay siinaysaa cunug gaar ah oo gaar ah, taas oo la mid ah xaalad ay caruurtu ku xasuusiyaan "nolosha saxda". Tani waxay ka dhigan tahay in caruurtu ay u dhaqdhaqaaqi karaan alaabta guriga lagu raaxeysto si ay ugu celiyaan dabeecadaha ay ogaadaan waalidkood.
Natiijo ahaan, waxaa jira saameyn waxbarasho oo laba-laab ah
Marka hore, caruurtu waxay la jaanqaadaan habdhaqanka xaaladaha dadka waaweyn ee degaankan. Tani waxay ka dhigan tahay in alaabta carruurtu ku ciyaarto carruurtu ay u suurta geliso in ay ku shaqeeyaan hawlo maalmeedka qaarkood iyo wixii ka sarreeya si ay u ogaadaan macnaha ka dambeeya iyaga. Mid hubaal ah wuxuu isku dayi karaa inuu ilmaha u sharaxo sababta ay alaabtu ku jirto boorso ama sababta rootiga loogu shubo foornada.
Kaliya marka ilmuhu awood u leeyahay in uu ku dhaqmo ficiladaas waxaa hubaal ah in uu si dhab ah u fahamsan yahay waxa hooyada ama aabuhu ay ku sameynayaan habkan. Horudhaca taariikhda waa tallaabo muhiim ah oo lagu baranayo qaababka bulshada. Marka la soo gaabiyo: muraayadaha dollinka, cunuga waxaa la siiyaa goobta tababarka halkaas oo ay ku tababaran karaan lana dhisi karo nolol maalmeedka.
Tani waxay markaas keentaa in labaad, muhiim ah. Waxay u muuqan kartaa mid aan caadi ahayn, hase yeeshee kuraasta dilladu waxay faa'iido u yeelan kartaa helitaanka luqadda ilmaha. Goobta bilawga ah waa mar kale in alaabta dollka ay abuurto jawi aad u la mid ah kan waalidka u dhaqma. Dabcan, habdhaqanka waalidku waxay sidoo kale u baahan yihiin in ay hadlaan.
Ilmuhu wuxuu helayaa xirfadihiisa luqadda isagoo ku takhasusay waalidiinta. Sida horey loogu sharraxay, alaabta dollka waxay abuureysaa si sax ah bey'addan oo ay caruurtu ku dhiirigeliyaan inay dib-u-hagaajiyaan dhaqanka waalidiinta si faahfaahsan. Haddii ilmahaagu ku ciyaarayo ilmihiisa buuggan, wuxuu u sheegi doonaa waxyaabo isku mid ah ama kuwa la mid ah oo aad sida caadiga ah sameyneyso.
Laga soo bilaabo aragti aad u aragto, mid ayaa odhanaysa halkan, cunugaagu wuxuu dib u dhigi doonaa falalka hadalkaaga ee xaaladaha isticmaalka saxda ah. Ilmuhu wuxuu ku dhaqmaa inuu isticmaalo jumladaha iyo ereyada si sax ah. Taasina waxay tahay waxa ka caawinaya ilmaha inuu fahmo macnaha ereyada wanaagsan.
Qalabka ilmaha lagu raaxaysto wuxuu kor u qaadaa horumarinta ilmaha iyadoo la siminaayo jawi ay carruurtu ku dhaqmi karaan dabeecad bulshadeed iyo dabeecad afka ah. Si kastaba ha noqotee, ma jirto qol ku filan oo ku yaal xannaaneyn kasta si loo sameeyo hal ama dhowr alaab guri.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan rabin inaad ka tagto caruurtaada goobta tababarka ee dib u soo celinta iyo ku dhaqanka habdhaqanka bulsheed, waxay ku gaari karaan saameyn isku mid ah iyada oo loo marayo qolka aqalka. Ilmahaagu wuxu helayaa jawi ku haboon inuu ku soo celiyo waayo-aragnimada. Mar labaad, ilmahaagu wuxuu ku dayi karaa oo ku dhaqmi karaa dabeecadaha bulshada xaaladaha asaasiga ah.